Air Display 3, misy fihenam-bidy lehibe ao amin'ny App Store | Vaovao IPhone
Amin'ny fotoana maro, azo antoka fa mihoatra ny iray no mila manana monitor faharoa hahafahana manao asa iray. Raha ny lojika, raha tsy ilaina isan'andro, dia tsy mitombina ny fividianana monitor ho an'ireo tranga ireo ihany. Fa raha manana iPad isika, noho ny rindranasa Air Display 3, azontsika atao ny mampiasa azy ho toy ny monitor ivelany ho an'ny Mac, hahafahantsika mahafeno ny filantsika manokana amin'ny fotoana rehetra amin'ny fampiharana iray fotsiny. Saingy ilaina ihany koa izany raha mandany ny tontolo andro isika eto miaraka amin'ny solosaina finday ary amin'ny fotoana sasany dia mila mampitombo ny efijery an'ny Mac isika.
Air Display 3, mamela antsika hampiasa ny fitaovana iOS ho efijery fanampiny ho an'ny Mac, na amin'ny alàlan'ny fifandraisana tsy misy tariby na amin'ny alàlan'ny fampiasana ny tariby USB. Amin'izao fotoana izao dia tsy mifanaraka amin'ny Mac ihany io fampiharana io, fa ny an'ny teo aloha kosa mifanaraka amin'ny Windows. Air Display 3 dia manana vidiny mahazatra ao amin'ny App Store 14,99 euro, saingy mandritra ny fotoana voafetra dia afaka mahazo izany amin'ny 4,99 euro fotsiny isika, Tolotra iray raha miandry azy ianao dia tsy ho afaka mandà.
1 Endri-javatra lehibe Air Air 3
2 Fepetran'ny Air Display 3
Endri-javatra lehibe Air Air 3
Fifandraisana USB: Ho fampisehoana haingana sy azo antoka kokoa aza, azonao atao ny mampifandray ny fitaovana iOS sy ny Mac amin'ny alàlan'ny tariby USB.
Fihetseham-po amin'ny tsindry: Mampiasà penina mora tohina amin'ny tsindry na koa ny rantsan-tànanao hanoratanao na handoko amin'ny fampiharana Mac mora tohina toy ny Photoshop sy Motion.
Pinch Zoom: zahao ao mba hanitatra ny efijery. Ilaina indrindra izany rehefa manao antsipirian'ny sary na sary hosodoko.
Fanaraha-maso marobe: Ny Air Display dia mampifandray ny iPads 4 miaraka miaraka amina fananganana multi-monitor mahery.
HiDPI: safidio ny vahaolana Normal, Retina na HiDPI mifanaraka amin'ny tsironao.
Kitendry: Soraty amin'ny alàlan'ny kitendry namboarina ao amin'ny Air Display na keyboard Bluetooth rehetra.
Fihetsiketsehana mikasika: Azonao atao ny mifehy ny Mac amin'ny fihetsika iOS mora tohina: kitiho na sintomina hampiasana ny totozy na ny rantsantanana roa amin'ny tsindrio havanana
Fepetran'ny Air Display 3
Desktop: Mac OS X 10.8 (Mountain Lion) na avo kokoa
Windows: mbola tsy tohanana, fa miambena hatrany! Ny mpampiasa Windows dia tokony misafidy ny Air Display 2
Raha hampiasa teknolojia Wi-Fi, ny fitaovana Mac sy iOS dia tsy maintsy ao amin'ilay tambajotra Wi-Fi iray ihany.
Noho ny hadisoana famakiam-boky avy amin'ny antoko fahatelo dia tsy mandeha mandritra ny fotoana fohy ny fahatsapana tsindry ao amin'ny iOS 9.
Aseho amin'ny rivotra€ 16,99
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Fampiharana iPhone » Air Display 3, misy fihenam-bidy lehibe ao amin'ny App Store
Zum zum ity…